Banijya News | एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दै, फ्लोर क्रस गर्ने २२ सांसदमाथि होला त कारवाही ? - Banijya News एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दै, फ्लोर क्रस गर्ने २२ सांसदमाथि होला त कारवाही ? - Banijya News
एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दै, फ्लोर क्रस गर्ने २२ सांसदमाथि होला त कारवाही ?
साउन ५, काठमाडौं ।
सोमबारदेखि शुरु भएको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक आज मंगलबार पनि जारी रहने भएको छ । ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल प्रतिष्ठानमा शुरु भएको बैठक आज दिउँसो ३ बजे बस्ने भएको हो। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने नेताहरुलाई सोधिएको स्पष्टीकरणका विषयमा छलफल हुने पार्टी कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिए ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका ८ जना र माधव नेपाल पक्षका १४ जना गरी २२ सांसदले प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए। त्यसैगरी, माधव समूहका १० जना अनुपस्थित भएका थिए। सांसद भीम रावलले मतदान अघि नै राजीनामा दिएका थिए। सोमबारको बैठकले ती २२ जना सांसदलाई २४ घण्टाभित्र स्पष्टिकरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ।
केन्द्रीय कमिटी बैठकले फ्लोर क्रस गर्ने पार्टीका २२ सांसदलाई कारवाही गर्ने तयारी गरेको छ। तर, प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधानको धारा ७६ (५) मा ह्विप नलाग्ने आदेश गरेको छ। देउवालाई विश्वासको मत दिएपछि एमाले भित्रको विवाद थप उत्कर्षमा पुगेको छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेता नेपाल पक्ष भने अनुपस्थित हुँदै आएको छ ।